Programme momba ny andraikitra ara-tsosialy WoopShop
Ny fandaharan'asa andraikitry ny fiaraha-monina ara-tsosialy
Mba hitazonana azy ireo ..
Mbola betsaka ny fananana orinasa mahomby fa tsy mitady tombony fotsiny. Izy io koa dia amin'ny fanaovana fanatanterahana tena misy fiantraikany sy misy fiantraikany tsara amin'ny fiaraha-monina.
Amin'ny maha-mpitarika anay amin'ny sehatry ny E-varotra, orinasa miandraikitra antsika miasa koa isika mba hiantohana fa ny fivarotana an-tserasera dia mitondra ny fampandrosoana maharitra sy ara-tsosialy any amin'ireo firenena afrikanina.
Nohamafisinay io fanoloran-tena io ho an'ireo mpiasa, mpanjifanay ary mpiara-miasa aminay. Noho izany dia nametraka ny isan-jaton'ny tombony ho an'ity programa fanampiana ity izahay ary nanome ny fahafahan'ny mpanjifantsika mandray anjara amin'ity programa ity amin'ny alàlan'ny fanomezana avy amin'ny pejy fizahana.
Ity vola miditra ity dia holaniana any Afrika mba:
Manohana ny fanabeazana ary hanafoana ny tsy fahaiza-mamaky teny.
Manome anjara amin'ny famongorana ny fahantrana sy ny hanoanana tafahoatra.
Fanohanana ny sehatry ny fahasalamana amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fahafatesan'ny zaza sy ny aretin'ady.
Aza misalasala mandray anjara sy mandray anjara amin'ny fanatrarana ireo tanjona mendrika ireo amin'ny fanomezana ao amin'ny checkout.